Manchester City oo gashay heshiiskii labaad ee ganacsi ee ugu qaalisanaa taariikhda Horyaalka Ingiriiska – Gool FM
Manchester City oo gashay heshiiskii labaad ee ganacsi ee ugu qaalisanaa taariikhda Horyaalka Ingiriiska
(Manchester) 28 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ee waddanka Ingiriiska ayaa gashay heshiiskii labaad ee dhanka ganacsiga ee ugu weynaa taariikhda Horyaalka Ingiriiska markii ay qandaraas la saxiixatay shirkadda qalabka Isboortiga ee laga leeyahay Jarmalka ee Puma.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegtay in kooxda Man City ay heshiis dheer oo 10 sanadood ah la gashay Puma, iyadoo sanadkii ku qaadanaysa 65 milyan oo giniga istarliinka ah (86 milyan oo dollar).
Lacagtan oo ah mid aad uga badan inta ay bixiso shirkadda ay haatan Manchester City wax u xayaysiiso ee Nike (20 milyan oo gini) 26 milyan oo dollar ayaa waxaa uu bilaaban doonaa dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda, waqtigaas oo ku eg qandaraaska Nike.
Afar kooxood oo kale oo hoos taga Manchester City (Melbourne City, Girona, Atletico Torque iyo Sichuan Jiuniu) ayaa iyaguna garoommadooda, dharkooda iyo waxyaabaha ay soo saaraan ku xayaysiin doona Puma.
Kooxda ay City isku magaallada yihiin ee Manchester United ayaa haysata rikoorka heshiiska ugu qaalisan dhanka ganacsiga ee Ingiriiska iyadoo qandaraas kula jirta shirkadda Addidas, sanadkiina ka qaadata 75 milyan oo giniga istarliinka ah (99.6 milyan oo dollar).
Harry Kane oo la soo baxay wejigiisa u qarsoonaa ee Diego Costa…!!